Maalinta: Oktoobar 17, 2019
Jadwalka Jadwalka Baska ee Kahramanmara Fair ayaa la shaaciyey
Bandhigga Buugaagta iyo Dhaqanka ee Kahramanmaraş, oo ay soo qaban qaabin doonto Dowladda Hoose ee Magaalada, ayaa sannadkan la abaabuli doonaa. Buug-yaraha iyo Dhaqanka ee Magaalada Kahramanmaraş waxaa lagu qaban doonaa 6 sannadkan [More ...]
Degmada Eskişehir Metropolitan Municipal, oo tusaale u ah machadyo badan, gaar ahaan degmooyinka leh shaqooyin la taaban karo oo laga bilaabay İnönü sanadkii la soo dhaafay, iyo sayniska ka shaqeeya Ankara ee ku saabsan amarada Mansur Yavaş, Duqa Magaalada Ankara. [More ...]
Samsun Sivas Railway waa in loo galiyaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah
BEST Party Samsun ku xigeenka Bedri Yasar, "Wadada tareenka ee Samsun-Sivas (Bold) waa in loo furo adeegga sida ugu dhakhsaha badan," ayuu yidhi. Xisbiga BEST Xisbiga Samsun Bedri Yasar, ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay, “taariikhda tareenka Samsun-Sivas (Thick) [More ...]
Diyaarinta Isweydaarsiga Fasaxa Alanya
Dowladda Hoose ee Magaalada Antalya, gaar ahaan saacadaha fiidkii ee taraafikada, waxay ku dhowdahay inay xirmaan isweydaarsiga lagu sameeyay Alanya Mola. Nasashada waxaa lagu bixiyay isgoyska ka dib qaban qaabada. Qeybta taraafikada iyo maamulka degmada Alanya ee Magaalada Antalya [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa inay ka shaqeyso dhismaha wadooyinka cusub meelo badan oo magaalada ah si loo yareeyo isku socodka magaalada iyo xalinta dhibaatada gaadiidka ee xaafadaha. Muhiimadda koowaad siinta mashaariicda yareyn doona cufnaanta taraafikada gaar ahaan saacadaha ugu badan [More ...]
Muğla Road Works 2450 Km Gaadhay
Muğla Metropolitan Municipal 2019 oo ku taal Muğla oo ku taal 150 km dhinaceeda wadada adoo sameynaya shaqada muwaadiniinta la soo bandhigay. Tan iyo maalintii la aasaasay 2014, waxay muhiimad weyn siineysaa wadooyinka [More ...]
Xawaare Wanaagsan Xawaare sare leh Çanakkale!
Bandırma-Bursa-Çanakkale-Bilecik mashaariicda tareenka xawaaraha sare waxaa loo qorsheeyay in lagu dhammeeyo 2021. Shaqo ayaa socda mashruuca Bandmarma-İzmir, Bandırma-Bursa-Bilecik ee tareenka xawaare sare ku socda iyo mashruuca tareenka ee Bandırma-Çanakkale-Tekirdağ oo ay diyaarisay GMKA. Marka mashaariicda la dhammaystiro, 30 inta u dhaxaysa Bandirma iyo Bursa, inta u dhaxaysa Bandirma iyo Izmir [More ...]
Badda Adduunka iyo Cable Car 12 oo Bilaash ah ilaa Da'da ah
Turgut Altınok, Duqa Magaalada Keçiören oo kaqeybgalay shirkii Caruurta ee lagu qabtay Golaha Dowlada Hoose ee Keçiören inta lagu gudajiray Toddobaadka Dimuqraadiga Maxalliga ah ee Yurub, ayaa yiri: [More ...]
RayHaber 17.10.2019 Warbixinta Shirka
Adeegga Shaqaalaha waa in laga Qaadaa Dhismaha Platform hooseeya inta u dhaxaysa Wadooyinka 1 iyo 2 Wadada Niğde Station iyo Bor Station
Maamulka YOLDER ayaa lagu booqday Ankara
Gudoomiyaha Yolder Şakir Kaya iyo gudoomiye ku xigeenka Suat Ocak waxay booqashooyin isdaba joog ah ku joogeen Ankara. Mehmet Soner Baş, xubnaheena ayaa loo magacaabay Madaxweyne Kuxigeenka Waaxda Dayactirka TCDD [More ...]
İmamoğlu: 'Jooji hindisada Haydarpaşa iyo Saldhigyada Tareenka ee Sirkeci oo boos ha siiya IMM'
Duqa magaalada Ekrem İmamoğlu ayaa sheegay in hadii qandaraaska howlgalka Haydarpaşa iyo saldhigyada Sirkeci aan la siinin IOM, uusan ka bixi doonin albaabka wuxuuna ugu yeeray Wasaaradda Gaadiidka in ay baajiso qandaraaska oo ay siiso IOM meelaha ay ku shaqeeyaan. Weyn Istanbul [More ...]